Kugamuchirwa kuSamoa | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Oceania, Chii chekuona
Kana ndikafunga nezvekuti hupenyu hunofanira kunge hwakaita sei mu paradhiso Handizive kuti sei asi ini ndinogara ndichifungidzira chitsuwa chiri muPacific, chine zuva, miti yemichindwe, mvura yakachena sekristaro, jecha jena, mhepo yegungwa uye rugare rwakawanda. ¿Samoa, pamwe?
Samoa kune imwe yenyika dze Polynesia uye iwe zvechokwadi wakanzwa nezve iyi chaiyo paradhiso nekuti ine timu ine simba ye rugby uye inoshamisa nharaunda. Ini ndinofunga kuenda parwendo rwekuenda kuSamoa kana denda iri rapera kunogona kurapwa zvakanyanya. Nhasi, Samoa nenzvimbo dzayo dzinoshanya.
Sezvatakataura, inyika yakazvimirira iri muPolynesia uye nehunyanzvi chikamu cheOceania. Isati yave nemamwe mazita, German Samoa neWestern Samoa, asi kubvira 1962 inodaidzwa kuti Samoa uye inyika yakazvimiririra (kubva kuNew Zealand). Iine zviwi zviviri zvikuru, Sava'i neUpolu.
Vagari vayo vekutanga vakasvika kubva kuFiji makore anenge 3500 XNUMX apfuura uye maEuropean vakadaro muzana ramakore rechiXNUMX, kunyangwe kusangana uku kwekupedzisira kwakaitwa zvakanyanya muzana ramakore rechiXNUMX pamaoko evaBritish. Yakanga iine nguva refu yekoloni yakapararira pamusoro peUnited Kingdom, Germany neUnited States.
Kusvika 1962 yaive pasi pehutongi hweNew Zealand. Nhasi inyika yeparamende, yakafuridzirwa nemhando yeChirungu yehurumende. Zviri nyika yechiKristu kazhinji uye chimwe chezviwi zviviri chakakamurwa mumatunhu akasiyana. Izvi zviwi ndezvemakomo anoputika uye kune zvimwe zviwi, zvisere pamwe chete, munharaunda iyi. Mamiriro ekunze pano anopisa iine avhareji yegore yakatenderedza 26ºC uye yakawanda mvura pakati paMbudzi naApril.
Samoa inogona kusvika nyore kubva kuAuckland mumaawa matatu nehafu nendege. Nhandare yekupinda mu Faleolo International Airport, maminetsi makumi matatu nemashanu kubva kuguta guru renyika, Apia, pachitsuwa cheUpolo. Kubva pano unogona kufamba nechikepe kana kutora imwe ndege kuenda kuchitsuwa cheSaivai. Kuti usvike kuguta unogona kutora bhazi kana tekisi.
Kutenderera zviwi zviri nyore nekuti unokwanisa kurenda mota kana bhasikoro kana sikuta uye ndine rusununguko. Zvikasadaro unogona kugara uchishandisa iyo mabhazi eruzhinji, iyo inongogamuchira mari kana kunamatira kune yakasimba purogiramu Zvitsuwa zviviri zvikuru zvakabatanidzwa ne chikepe service zvakajairika zvinotora vanhu nemota uye gare gare, zvitsuwa zvidiki, zvinosvika mumatare echikepe.
Ngatitangei chii chatingaone muUpolu. Pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwechitsuwa ichi kune nzvimbo yakanaka, inozivikanwa pasirese: a mugoronga mugungwa 30 metres akadzika anonzi To-SuaNzvimbo isina kujairika uye yakanaka kushambira yakakomberedzwa nehuswa hwakasvibira uye makuru maonero egungwa. Kune chikuva chehuni chaunosvetuka kubva pachiri uye chinotonhorera chose. Iwe unobhadhara kuti upinde, asi haugone kuchipotsa.
Pamusoro pemhenderekedzo yekuchamhembe kune imwezve dziva rechisikigo Iyo yakaumbwa nebasa remakomo uye inodyiswa nechitubu chinomuka kubva mubako pasi pegungwa. Mvura yakajeka sekristaro asi inodziya uye bako iri rakanaka. Hapana chinhu chiri nani pane snorkeling kutenderedza pano. Ndezve iyo Puil Cave Dzivaa, makiromita makumi maviri nematanhatu kubva kuApia zvichitevera mugwagwa mukuru wemumahombekombe.
Iwe unogona zvakare kushanyira iyo Robert Louis Stevenson Museum, munyori we Pfuma chitsuwa. Iri pamusoro peguta reApia uye iri imba yakanaka ine mapindu. Imba, zvirokwazvo, kwaigara munyori murudo neSamoa. Kubudikidza nemagadheni munhu anogona kuenda achiongorora nekutevera nzira yemigwagwa miviri yehukuru hwakasiyana, iyo inokwira kudzamara imwe neimwe ichipa anoshamisa maonero.
Zvakare kumucheto kweApia kune iyo Palolo Yakadzika Marine Reserves, nzvimbo yakachengetedzwa. Unogona kushambira zana metres kubva kumahombekombe, kuyambuka reef, kusvika iwe wasvika pa yakasikwa aquarium. Iyo coral wall inodzivirira uye inovhara yakanaka yepasi pemvura paradhiso, super akasiyana, ne hove dzegungwa, shark uye hove dzinopisa. Iwe unogona kukwereta michina yekubata snorkeling uye iyo diki chitoro inopa chikafu uye zvinwiwa uye kuwana kune yegungwa ine matumba.
Pamhenderekedzo, pane zvakare chitsuwa chidiki chakanaka chinonzi Namua. Kuyambuka kunotora chete maminetsi gumi nechikepe kubva kumusha weLalomanu. inzvimbo huru yekuenda zuva rechitatuPo yekugara husiku hwese mumatumba pamahombekombe. Mvura iri pasi uye yakadzikama, kune hove dzegungwa uye kunyangwe matombo ari kupora kubva muna tsunami ya2009, zvese zvatova zvakanaka kwazvo uye kunyange kufamba kwakatenderedza chitsuwa nemakomo acho kunoshamisa.
Kutaura nezve Lalomanu mhenderekedzo yegungwa inozivikanwa kwazvo, ine jecha rayo jena uye nzvimbo diki dzekuchengetera uye makabhini ekurara. Iwo maresitoreti anowanzo kuve nehusiku, masolorloric anoratidza, uye kazhinji inzvimbo yemhuri yekuenda.
Kuti uzive tsika dzevaSamoa unogona kuenda kunotora chikamu muFa'a Samoa nekushanyira iyo Samoan Cultural Village muApia. Mamwe mahombekombe akanaka uye anozivikanwa ndeaya Matareva Gungwa and the Salamumu Beach. Chekupedzisira, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda iwe unogona zvakare kufamba mumasango anonaya, ona mapopoma, hove, shanyira iyo Lanoto'o gomo rinoputika, kwira Mount Fiamoe ...
Kana iwe uchida gungwa rakawandisa, unoriwana kumwe kunhu, asi kuriko, uye apa ndipo paunogona kudzidza kana kudzidzira kushambira, zvese muUpolu uye muSavai'i yakavakidzana. Kutaura nezve ichi chimwe chitsuwa, Chii chatingaite muSavai'i? Pano, mumusha weSatoalepai unogona kushambira nehukuti dzakasvibira muhusungwa hunosunungurwa gare gare. Iyi nzvimbo inoyerera yekamba inoitiswa nemhuri yemuno inobhadharisa mari shoma yekupinda kuchengetedza saiti uye ingori awa nehafu nechikepe kubva kuUpolu.
Pachitsuwa ichi pane Saleaula Lava Munda, the Gomo Silisili anenge 1900 mita kukwirira kwakakomberedzwa nemasango anonaya, iyo Manas Beache, inonyanya kufarirwa, iyo Cape Mulinuula Pagoa mapopoma emvura, iyo Monet Matavanu uye ayo akanaka panoramic maonero, iro gomba rinosvipa mvura kubva Alofaaga, Tafua crater, Peapea Cave, pombi yakaoma yegomo rinopfuura kiromita kubva kumahombekombe, iyo Mataolealel chitubukana, Bako reMadzviti Paia, rakareba kiromita saka rinotsvakurudzwa muzuva rimwe chete kana yakakurumbira Stone House.
Pakupedzisira, zvimwe zve ruzivo nezve Samoa:
mamiriro ekunze anonyorova uye anopisa gore rese. Kune mwaka wemvura kubva muna Mbudzi kusvika Kubvumbi uye iyo yakanyanya kunaya mvura iri pakati paZvita naKurume.
Zvinokurudzirwa kuve neinishuwarenzi yekurapa kuti ushanyire.
Iwe unofanirwa kunwa mvura yakabhoderedzwa uye kubaiwa majekiseni chaiwo nemishonga yekudzivirira iyo yatinozvipa isu kuMadokero sevana. Ini ndinofungidzira kuti iyo CXovid 19 ichave zvakare kurairwa munguva pfupi.
kune humhutu pano saka dengue, zika uye chukungunya varipo. Ndokusaka anodzinga akakosha.
panyika hapana mhuka dzine uturu kana zvipembenene.
Iwe unogona kutyaira asi iwe unoda rako pachako kunyoreswa kwenyika uye nyorera pano kune rezenisi renguva pfupi iro rinogona kuwanikwa zvakananga kubva kune yekuhaya mota agency.
kunyange makadhi echikwereti achigamuchirwa, zviri nyore kuva nezvakawanda mari. Mari yemuno idanda rekuSamoa.
Svondo rinoyera saka hapana kufamba kwakavhurika.
muSamoa kune nguva yekuenda kumunamato wemanheru. Yakatumidzwa zita sa uye kazhinji iri pakati pa6 na7 pm. Bhero kana goko trinket rinorira uye rinogara risingapfuure maminetsi makumi maviri. Munguva ino, dzivisa kufamba pakati pemisha kana kuita ruzha.
Samoa haidi vhiza yekugara isingasviki mazuva makumi matanhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Oceania » Welcome to samoa